तथास्तु – Karnalikhabar
दाइ , दाइ त्यो बटुवा को के भयो??
उसले उत्सुक मुद्रामा ङिच्च हासेरँ म सङ्ग सोध्यो,
भन्नू न तपाईंको कहांनी सार्है राम्रो थियो।😁
अनि मैले फ़ेरि शुरु गरेँ। अँ.. अब त्यो बटुवा लामो यात्रा क्रम मा थाकिसकेको थियो, भोक प्यास ले विचलित , अगाडि बढीरहेको थियो।। त्यसै बेला एउटा् मान्छे एक टुक्रा रोटी लिएर आयो र उसलइ रोटी दिन अगाडि बढयो, तर तुरुन्तै अर्को एउटा् ठुलो भुडी भएको मान्छे को हात ले च्याप समात्यो र भन्यो ए भाइ ! तपाईं उसलाई यसरी यो रोटी दिन पाउनु हुन्नं..! यसरी फाइदा लिन पाइन्न अहं..।।
(#यत्तिकैमा मलाइ यता को भाइ ले सोध्यो)
त्यसले त भोको लाई रोटी दिदै थियो किन रोकेछ दाइ त्यसले…? मैले उत्तर दिए -भाइ- त्यस्ता रोटी दिने त्यहाँ अरु अरुहरु पनि केहि थिए र समय समयमा देखिइरहेका थिए।। उनिहरु के गर्थे थाहा छ? त्यहाँ त्यस्ता बटुवाहरु लाई दिएको रोटी को हिसाब किताब र सबुत सहित झोलामा दक्षिणा लिएर नजिकै को शिव मन्दिर मा जान्थे र भगवान लाई सबुत देखाउदैं आफ्ना इच्छाहरु को बरदान माग्थेँ।।
#उ छक्क पर्यो ए हो र….??
#म–सबै त्यस्ता थिएनन। तर त्यो ठुलो भुडीँ भएको पनि त्यस्ता प्रविती का मान्छे बाट त्रसित थियो। उसलाई पनि डर थियो। भोलि भगवान यसका काम बाट प्रशन्न भए भने उसलाई पनि वरदान दिन्छन।। .. अनि उ पो ठुलो हुन्छ कि भन्ने डर पनि अलिअलि थियो …बुझ्यौ?
(अब सुन फेरि… अ म काहाँ थिएं?)
#त्यो रोटी दिन लागेको मान्छे ले त्यो हात समाउने मान्छे लाई सोध्यो- किन दिन सक्दिन म रोटी ..? उसलाइ हेर्नू त भोक प्यास ले कति तडपिरहेको छ तपाईं को मानवीयता खोइ?।।
त्यो हात समाउने मान्छे अलि रंगिन , बिन्दास मिजास को थियो।——– ए बा..बा…!
तपाईं ले दिएको यो रोटी ले उसको तत्काल भोक मर्छ।। तपाईं हाम्रो शरीरमा हेर्नुस त भुडी कति तल छ अनि हृदय कति माथी छ (मुटु ) ! उसको हृदय आत्मा जन्मौं देखि को भोको छ हामीले त्यो भोक मार्नु पर्छ। यो आज को एउटा् रोटी ले केही हुन्न दिनै परे म दिन्छु बुझ्नुभो।।
यति भनेर उ आफ्नो कोट को भित्री खल्ती बाट सुन को बासुँरी निकाल्छ र भन्छ संगीत मा सात सुर छन । हाम्रो सकृति, संस्कार , अनि नैतिकता को आठैं सुर म बजाउँछु अब…… जसले उसको जन्मौं देखिको भोक मेटाउने छ र उ तृप्त हुनेछ। यति भन्दै उ बाँसुरी बजाउन थाल्छँ।
अनि त्यो बटुवा त्यही सुन्न थाल्छ सुन्दै छ तृप्त हुने र भोक मर्ने आश मा।।
#उ–..हय्या…दाइ… तेस्तो पनि हुन्छ त ? अब सङ्गीत को सुर ताल सुनेर नि कसै को भोक मर्छ त…? खास कुरो चाहिँ के हो त्यो पनि भन्नू न…!!! त्यो बाँसुरी बजाउने चाहिँ को हो? कस्तो रुपको छ?
#म- ती बाँसुरी बाल पनि वरदान पाएका एक शक्तिशाली पात्र हुन, यिनिको कुनै निश्चित रुप छैन । बिचित्र को छ खास गरि खण्डाग्रस को समयमा चन्द्रमा को कालो र सेतो भाग मा देखिने दृश्य जस्तो घरीघरी दैत्य र घरीघरी देवता को स्वरुप देखिन्छ।। तर अहिले यिनिहरुमा राहुकाल हावी छ र प्राय दानविय कार्य मा रुचि र खुसी हुन्छन् ।।
अनि खास कुरा चाहिँके भने नि मैले पहिला नै भनेसकेँ तिमिलाइ कथा को शुरूवात मै ।।
गाउँ- गाउँ मा नरभक्षि हरु छिरेका छन शंकट छाएको छ साना दुरिका बाटो हरुमा बढी आक्रमण हुने शन्केतं र खतरापूर्ण छन ।।
अब भएको चाहिँ के भने ……
त्यो बाँसुरि बजाउने जस्ताहरु त्रसित छन नरभक्षिले कसैलाई बाँकी राख्दैन यदि यस्ता बटुवा २/४ जना तिनीहरु को शिकार हुन थाले भने हामी पनि बाच्दैनौ भन्ने त्रास छ उनिहरु मा। अहिलेसम्म त उनिहरु सुरक्षित छन जानकार वैद्य र सुरक्षा का समान ले घेरिएका छन तै पनि नरभक्षि को शिकार भए बाच्ने आश कमै छ। त्यही भएर यो सब हुदैछ गर्दैछन।। मेन डर उनिहरुलाइ यस्ता बटुवा को कारण ले हामी मर्छौं कि भन्ने छ।
#उ– त्यसो भए अब अन्त्यमा के हुन्छ त ?
त्यो मोटोघाटाे छ ठुलो भुडी भाको बलवान् पनि छ । त्यो सुर र राग ले त भुडी पक्कै भर्दैन उ त त्यसै कमजोर छ नि है?? के गर्न सक्ला र उसले बिचरा……😢😢😢।।।
#म- हैन नि भाइ ..
यिनिहरुमा पनि बिधान यस्तो छ…
एकदिन का लागि यिनिहरु ले पनि देवादी देव स्वरूप पाउँछन्….।
हरेक चौथो बर्ष को अन्त्यतिर सुर्य खण्डाग्रस मा ग्रहण लाग्न थाल्छ सुर्य ग्रहण को त्यो नकारात्मक प्रभाव ले ती अगाडिका बाँसुरी धारी हरु शक्तिहिन हुन थाल्छन् पुनः शक्ति प्राप्ति का लागि वरदान माग्न जानुपर्ने हुन्छ त्यतिबेला यीनै भोका बटुवाजस्ता हरु ले पुर्ण रूपमा देवरुप धारण गरि वरदान दिनका लागि तयारीमा हुन्छन् र कुनै एक लाइ तथास्तु भनी वर दिन्छन त्यति शक्तिशाली छन यी बटुवा थाहा छ?
त्यो दिव्य तिथिलाइ #चुनाव# भनिन्छ त्यस बेला देखाउँछन यिनी हरु ले पनि तथास्तु भनी कसलाई वरदान दिने भनेर । अहिले त्यो भोको पेट जरुर छ तर बल त ठुलो भुडी मा भन्दा पतलो खियाउटे मा हुन्छ नि थाहा छैन? उ पनि अहिले सहुन्जेलं सम्म बा यो शंकट टल्छ कि म पनि तृप्त हुन्छु कि भन्ने आश मा जबर्जस्ती बाँसुरी को आठैं राग सुन्ने छ ।।
जब सिमा नाग्छ सहनशीलता ले तब त्यही बाँसुरी किलकिले सम्म आउनेगरी खादेरँ हिंड्छ।। शंकट देखा जाला भोको पेट नै सबैभन्दा ठुलो शंकट र समाधान हुन्छ बुझ्यौँ??।।
भाइ पनि छ्क्क पर्यो…।।
दाइ आशा गरौं त्यस्तो केही नहोस् सबै राम्रो होस।। यी बाँसुरी बाल को पनि सतबुद्दी आओस् शंकट टरोस।। भन्दै उ लाग्यो म पनि भित्र तिर लागेँ।।
अघिल्लो - कोरोनापछि पो थाहा भयो, हाम्रो अनुसन्धान, मेडिकल शिक्षा, विश्वविद्यालय शुन्य रहेछः संग्रौला
महेश बस्नेत भन्छन– बाबुराम भट्टराईमाथि कानूनी कारबाही गर्छौं - पछिल्लो